Firefox, waa biraawsarka ugu isticmaalka badan Cuba | Laga soo bilaabo Linux
Firefox, waa biraawsarka ugu isticmaalka badan Cuba
Iyadoo cinwaankeedu yahay: Firefox waxay ku guuleysatay dhulka Cuba en Mozilla-Hispanic ayaa daabacay maqaal aad u fiican oo ku saabsan heerka sare ee isticmaalka Mozilla Firefox dhulka Cuba. Waxaan uga tegayaa iyaga oo si hoose u sheegaya:
Firefox waxay ku guuleysatay dhulka Cuba
2011 wuxuu ahaa sanad ay jireen waxoogaa isbeddelo ah oo ku saabsan mowqifka isticmaalka daalacashada adduunka oo dhan, waa in la caddeeyaa in ujeeddada Mozilla aysan waligeed noqon suuqa ee ay ku faafto una dagaallanto Webka Furan. Laakiin inta isbeddelladani ka dhaceen adduunka, badhtamaha Caribbean-ka waxaa jira meel Firefox wali way sii socotaa oo, aad iyo aad iyo aad, waxay tusineysaa dheelitirka ay ku jirto, iyada oo heshay taageerayaal badan iyo adeegsadayaal daacad ah marka loo eego kuwa kula tartamaya berrinka
Iyada oo tirada isticmaalka 69.4% cajiib ah - in badan waxay u muuqan kartaa riyo - Waa macquul Cuba waana cabsi la'aan inaad dhahdo, waa wadanka maanta dawacada dabka iyo hadafka Mozilla. Laakiin, maxay taasi uga dhacday waddankaas Latin Amerika Firefox ma leeyihiin tiro adeegsi aad u sarreeya? In muddo ah hadda, dowladda Greater Antilles waxay xooga saareysaa adeegsiga softiweer bilaash ah iyo raadinta bedello bilaash ah oo ku saabsan codsiyada lahaanshaha, iyo mid ka mid ah barnaamijyada hogaaminaya arimahan ayaa si sax ah u ah biraawsarka Mozilla Firefox, kaasoo si joogto ah uga eryay dhamaan kuwii kasoo horjeeday qaab aad u xoog badan.
Haddii aan si taxaddar leh u eegno sawirka waxaan arki karnaa sida laga bilaabo Janaayo 2011 illaa maanta, Firefox waxay si tartiib tartiib ah uga kortay 59.73% ilaa 69.4% (Janaayo 2012). In kasta oo ay weli maalmo kooban ka hadhsan yihiin dhammaadka bisha Febraayo, haddana ma iska indho tiri karno imaatinka aqbalidda 70%, taas oo ah xaqiiqo in xubnaha Firefoxmania, Jaaliyada Mozilla ee Cuba Waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aad u faraxsan oo u booda farxad.
Sabab kale sababta Firefox uu kasbaday meel kumbuyuutarka qoyska reer Kuuba waa suurtogalnimada helitaanka goobaha soo degsashada rasmiga ah Firefox iyo ku daristeeda maadaama ay ka furan yihiin qaar badan oo ka mid ah wakiiladeeda waana wax aad u fudud in la badbaadiyo kudar ka Firefox kombuyutarkayaga maxaliga ah lana wadaag isticmaaleyaasha kale. Iyadoo la tixgelinayo inay jiraan tiro badan oo lagu daro oo noo oggolaanaya inaan qaabeyno Firefox illaa heer sare, tani waxay u oggolaaneysaa inaad haysato oo aad la socoto Firefox noqo farxad iyo khibrad gaar ah.
Intaas waxaa sii dheer, tartamayaashu waxay ciyaaraan door eber maadaama tan ugu dhow ay tahay Internet Explorer oo isticmaalkeedu hoos ugu sii dhacayo bilba bil ka hor iyo biraawsarka Google si rasmi ah looma heli karo waddanka Caribbean-ka sababo la xiriira siyaasadaha Mareykanka ee ka dhanka ah jasiiradda Caribbean, waxay sidoo kale ku dhacdaa ku darkeeda oo aan lagala soo bixi karin Dukaanka Webka ee Chrome.
Waxaan rajeyn karaa oo kaliya xitaa barwaaqo badan Firefox wadankaas, ku bogaadi reer Cuba doorashadii wanaagsanayd ee ay sameeyeen kuna boorri wadamada kale inay ku daydaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox, waa biraawsarka ugu isticmaalka badan Cuba
Aniga ahaan mid ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa jira, haddii aan ka helo maqaal sanad ka hor laga soo qaaday halkaas oo lagu muujiyay inay ka mid tahay daalacashada ugu fiican halkaas, oo ay weheliyaan opera, Chromium, Google Chrome. Burcad badeedyadii ugu fiicneyd ayaa isku aruursaday dhacdo iyadoo daalacashadaasna ay awoodi kari waayeen, meel xun oo baare, safari, iyo biraawsarka Blackberry, ayaan ka helay maqaalka.
Ku jawaab pacoeloyo
http://www.neoteo.com/pwn2own-2011-ie-safari-iphone-y-blackberry Maqaalka laga hadlayo
Waa inaan idhaahdaa xoogaa waan ka xanaaqay Firefox, waxaan garwaaqsanahay in qaybtan 10-ka ah waxqabadkeeda GNU / Linux ay hagaagtay, kiiskeyga khilaafaadka waxaa lagu soo bandhigayaa wadaha lahaanshaha Nvidia, KDE4.8 iyo alaabooyinka Mozilla (Firefox, Thunderbird, Seamonkey) Ma aha sidaas iyadoo la isticmaalayo darawalka bilaashka ah ee 'Nouveau', kaas oo nasiib daro wali aan u dhigmin Naryia binary.
In kasta oo aan isticmaalo Opera (oo si farxad leh loola yaabay jidka), waxaan u naxariisanayaa mid ka mid ah astaamaha barnaamijyada bilaashka ah sida Firefox.
Waa wax laga xumaado in "mid ka mid ah astaamaha software-ka bilaashka ah" runti uusan ahayn mid sidaas u xor ah ama aan danaynayn xorriyadda. Haddii aad rabto Firefox bilaash ah waxaad u isticmaali kartaa Iceweasel ka Debian ama GNU Icecat ka GNU.
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inay astaan ​​u tahay Isha Furan, oo aan aheyn SWL, ma hubo tan 🙂
Waxa ay astaan ​​u tahay waa xorriyadda shabakadda, heerarka 😀
Aragti ahaan Furan Isha waxay la mid tahay Software Free. Ficil ahaan, waa meesha aysan u dhigmin maxaa yeelay Furan Furan wuxuu ku dhejiyaa usha hadba kiiska ama waxa ay rabto inay cabirto.
Firefox waxay matalaysaa shey Mozilla ah, ma matasho Shabakadda Furan; Waan ogahay in maskaxda dad badani keega uu mid kale yahay, nasiib daro.
Xorriyadda shabakaddu waxay u baahan tahay tiro badan, sidaa darteed eexasho (wax kastoo ay tahayba) astaan ​​uma noqon karto xorriyadda shabakadda oo sidaas yeela ayaa wiiqaysa.
Waxay la mid tahay heerarka ay astaamahoodu noqonayaan kan iskaashatada iyo kan tiknoolajiyadda la xiriira. Firefox tusaale ahaan maahan astaan ​​HTML, CSS, iwm, waxay leeyihiin astaamahooda. Markay Firefox bedesho ayaynu dhibaato ku jirnaa Firefox-na waxay khatar ku tahay heerarka. Waxaan aaminsanahay tan waxaan horey ugula hadlay halkan.
By the way, "waxaa laygu qasbay" inaan galo goob aan doonayay inaan ka fogaado mowduuc kale. Sidii ayaan uga tagayaa in kastoo. 😛
Dulucda, Kordhinta iyo Tufaaxa qorfe
Sidee loo noqdaa "Khabiirka Kumbuyuutarka"?